Nkwupụta Mee ka ndị ọbịa na-agụ Blog gị | Martech Zone
Ha pịrị na peeji gị… ha gụrụ ntinye blog nke ha bịara. Ọ dịghị ihe ọzọ nwere mmasị n'ezie ha. Maara na ị nwere ọtụtụ akwụkwọ na-atọ ụtọ nke onye ọ bụla na-agụ ya nwere ike inwe mmasị na ya, mana kedu ka ị ga - esi gosi ha ndị ọhụụ ọhụụ gị 'na - agafe'?
Taa m nwetara ụfọdụ mma okporo ụzọ. Abụ m Mac, Abụ m PC nwetara na peeji nke n'ihu nke Netscape ma nweta ihe karịrị otu puku hits si na isi iyi naanị. Ọ na-gwa gwa Gbuo, StumbleUpon, Reddit, na Del.icio.us. Aga m enye gị ụfọdụ ọnụ ọgụgụ zuru ezu echi na akụkọ banyere ikike WordPress iji jee ozi nnukwu olu ahụ. Isi okwu m ebe a bu ihe di iche.
Nke a bụ nnukwu olu zuru ezu nke mere ka m nwee ike inyocha saịtị ma hụ ebe ndị ahịa si na peeji nke ụlọ m na-aga. Otu saịtị na-ekpuchi akụkọ bụ otu ebe a na-ekepụta clic n'ụzọ doro anya na ibe weebụ gị iji nye ihe ngosi nke ogo nke pịrị-pịa. Achọpụtara m ozugbo na ọtụtụ clicks gbadoro gburugburu m na-adịbeghị anya Comments na m sidebar. Ọ na-efesa na 35% nke ndị folks na-eleta ibe m ga-apụ na ibe ahụ. Agbanyeghị, ihe dị ịtụnanya 52.3% pịrị na a Adịbeghị anya Comment n'akuku m! Chaị!
Odika 10% ọzọ pịrị-site na njikọta njikọta n'okpuru n'okpuru ọkwa ọ bụla. Nke a dị ịtụnanya! Dị ka ihe na-adọrọ mmasị dịka m chere na blọọgụ m bụ, ndị ọbịa na-adabere na nkọwa ndị ọzọ iji hụ ihe na-adọrọ mmasị na saịtị m.
Otu enyi m si ọrụ, Randy, gwara m na ọ na-agụ naanị posts nwere 1 ma ọ bụ karịa ikwu na blog. Echere m na ọ na-atọ m ụtọ ma emere m mgbanwe na isiokwu ahụ iji gosi ọnụọgụ nke okwu; otu o sila dị, enweghị m ike ịtụle etu mgbanwe ndị ahụ siri metụta.
Taa ekwenyere m na egosipụtara m etu okwu dị mkpa, yana igosipụta ọtụtụ nkwupụta okwu na post ọ bụla. Enwere m ike ịnwa ịmekwu ọrụ na ibe m… ikekwe ndepụta nke ederede nwere ọtụtụ nkọwa na ha. Ọ na-aga igosi gị na mgbasa ozi mmekọrịta mkparịta ụka ahụ
. Họrọ nnukwu isiokwu na ide ihe nke ọma bụ akụkụ nke nha, mana ndị mmadụ bụ ndị na - elekọta mmadụ - ma na-atụgharị uche na isiokwu ndị metụtara ha niile.
MARA: Anọ m na-agba Nna Fada Mars Marsh -adịbeghị anya Comments ngwa mgbakwunye. Nke ahụ ziri ezi… Fada Rob bụ ụkọchukwu Roman Katọlik! Ekwetaghị m na ike ngwa mgbakwunye nwere mmetụta ọ bụla si N'elu, mana ejiri m n'aka na obere okwukwe enweghị ike imerụ ahụ, nri? Daalụ, Nna Rob!
Tags: blog kwuruịza ajụjụcommentsonye ọrụ mepụtara ọdịnaya
Weebụ 2.0, Vidiyo ahụ
Feb 7, 2007 n’elekere 12:24 nke abali
N'eziokwu, ọ na-atọ ụtọ mgbe nile ịgụ ihe ndị ọzọ kwuru. Ma eleghị anya n'ihi na ọ gụnyere mkparịta ụka.
Feb 7, 2007 n’elekere 3:39 nke abali
Ekwenyere m. Achọpụtala m nke a na stats webụ m kwa. Echere m na enwere ike ịmegharị webụsaịtị m n'ihu iji mee ka nkwupụta ndị ahụ pụta ìhè, yabụ nke ahụ bụ ọrụ ọzọ m ga-eme otu mgbede 🙂